Tag: video dikanteny | Martech Zone
Tag: dikanteny video
Rev: Fandraisana an-tsoratra an-tsary sy horonan-tsary, fandikan-teny, fanazavana, ary Subtitling
Talata, Oktobra 29, 2019 Talata, Oktobra 29, 2019 Douglas Karr
Satria teknika be ny mpanjifanay, matetika dia sarotra ho anay ny mahita mpanoratra manana fahaiza-manao sy mahay. Rehefa nandeha ny fotoana dia nanjary reraka tamin'ny fanoratana indray izahay, tahaka ireo mpanoratra anay ihany koa, ka dia nanandrana dingana vaovao izahay. Manana dingam-pamokarana izahay izao ary manangana studio podcast azo entina amin'ny toerana misy anay - na miantso azy ireo - ary manoratra podcast vitsivitsy izahay. Noraketinay an-tsary ihany koa ireo tafatafa.
Ny horonantsary vokatra dia manolotra ny mpivarotra e-mpivarotra fomba famoronana hanehoana ny vokariny sady mamela ny mpanjifa hanana fotoana hijerena ireo vokatra am-perinasa. Amin'ny taona 2021 dia tombanana ho 82% n'ny fifamoivoizana amin'ny Internet no ho fampiasa amin'ny fandaniana horonantsary. Fomba iray ahafahan'ny orinasa eCommerce mialoha izany dia ny famoronana horonantsary vokatra. Antontan'isa izay mandrisika ny horonan-tsarimihetsika vokatra ho an'ny tranokalan'ny Ecommerce: 88% an'ny tompona orinasa dia nilaza fa ny vidin'ny vokatra dia nampitombo ny vidin'ny fiovam-po
Ny tombontsoa azo avy amin'ny horonan-tsary amin'ny fikarohana, sosialy, mailaka, fanampiana… ary maro hafa!
Alarobia, Novambra 2, 2016 Alarobia, Novambra 2, 2016 Douglas Karr
Vao haingana izahay no nanitatra ny ekipanay tao amin'ny masoivohonay mba hampidirana mpanao sary an-tsarimihetsika efa za-draharaha, Harrison Painter. Faritra iray fantatsika fa tsy ampy isika. Na dia manao script sy mamorona horonan-tsary mihetsika mahavariana aza izahay ary mamokatra podcast tsara dia tsy misy kosa ny famahanam-bolongana an-tsary (vlog) anay. Tsy mora ny horonan-tsary. Ny mavitrika amin'ny jiro, kalitaon'ny horonantsary, ary koa ny audio dia sarotra atao tsara. Izahay dia tsy te-hamokatra horonantsary antonony izay mety na tsia